Kukhona isigaba abesifazane lamantombazana abenza zonke ukwelashwa ubuhle salon - master imaski sisetshenziswa kubo, futhi bayakujabulela ukuba ngaphandle ukuqonda ukuthi lezi buso zenziwa. Kodwa kukhona esinye isigaba - labo bayathanda ukwenza ngokwakho buso ekhaya. Kubo, futhi okuhloswe sihloko. Isihloko ingxoxo yethu - uwoyela peach.
Ingasetshenziselwa izinwele, futhi nail sula, ngisho eyelashes.
Kuwufanele kokusho amazwi ambalwa mayelana uwoyela - wena ukuyichaza ke, esenziwe amapentshisi. Noma kunalokho, kusuka imbewu. Kuyinto ecebile kakhulu fatty acid, ngaphandle okuyinto isikhumba sethu ayaphela okusheshayo. Oleic acid, palmitic acid, linoleic - uhlu lokunye acid kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kuhlanganisa Vitamin B15, okungakwazi kuphela ukuvimbela ukuguga, kodwa ukulwa ngesikhumba, isivele kuncike inqubo zokuwohloka.
A Amavithamini A no-E silondoloze ubuqotho isikhumba futhi le nqubo ukuguga ngenxa antioxidant futhi uyakulondoloza izakhiwo.
Futhi, yakhiwa izinto amaminerali -, i-phosphorus, i-calcium ne-potassium.
Kanjani sisebenzisa amafutha peach imigodi?
Ivame ukutholakala kusetshenziswa njengengxenye buso for the face. Okumangazayo - uwoyela peach moisturizes iphinde ivimbele ukushwabana kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi.
The Mask elula - Sebenzisa uwoyela ngobusuku. Esikhundleni amafutha okuthambisa ebusuku. ezinhle Ikakhulukazi lokhu imaski isikhumba esomile.
Njengoba uwoyela amuncwa umzimba kahle, singasebenza futhi esikhundleni ukhilimu zamehlo - njengoba pat evamile, njengoba uma ukhilimu lasetshenziswa.
Indlela enhle yokwenza ubuso ukhilimu yakho isebenze kahle kakhulu - iconsa amafutha kancane. Kodwa hhayi egabheni uqobo, futhi bakhonze wakho ongayedwa. Ungathenga i ukhilimu azibizi kakhulu, futhi usebenzisa le ndlela ukuze bazogcwalisa ngayo izinto eziwusizo.
Ungenza buso for eyelashes ke bayokhula mkhulu - ngaphambi kokulala ngobumnene ukusabalalisa esincane amagcobo phezu kwesihloko eyelashes futhi ushiye ihora nesigamu. Ungakushiyi endaweni ababezolala kuyo ebusuku, bese kuba emehlweni akho, futhi ekuseni uyoba ifilimu ezingemnandi esinamafu. Ungakwazi uhlanganise uwoyela ocolisekileyo peach ukuthuthukisa ukusebenza.
Amafutha has a nephunga elimnandi, ngakho ingasetshenziswa njengendlela namafutha lip.
Uma une sezinwele ezomile, noma nje ebucayi - ungakwazi omahhadlahhadla isigamu sehora lamafutha esikhumbeni. Khona-ke, kusobala, udinga ugeze izinwele zakho. Futhi, lolu imaski ikhuthaza okusheshayo ngalapho izinwele zikhula zibheke futhi ukuqeda dandruff. Uma ubeka impela kancane amafutha esihlokweni izinwele, ngeke kube ngumthwalo kubo, futhi bakwazi ukuvikela ngokumelene nolaka ilanga nolwandle amanzi, isibonelo. Ngakho qiniseka ukuthi ukuthenga ngaphambi kokuthi uhambe.
By the way, kungashiwo exutshwe nganoma iyiphi enye uwoyela ke abo izakhiwo ewusizo ngeke kabili (noma kathathu).
Buso kungenziwa ne ukwengeza ukhilimu, ukhilimu omuncu, peach uginindela, cottage shizi, bran.
Kodwa okumsulwa peach ibhotela kuyinto yezimonyo kakhulu.
Buso yezipikili nale uwoyela iya ngokuya ethandwa kakhudlwana.
Uma exfoliate izipikili - kusiza imaski iodine, kalamula peach ibhotela. uwoyela Peach kabanzi ukuze bathuthukise manje. Lokhu okugeza kufanele kuthathwe imizuzu 10-15.
Uma uphatha ukumbamba ngengcina yezinyosi, ungenza kanjalo: ancibilike ke, engeza ibhotela peach kanye abilisiwe amaqanda isikhuphasha. Kufanele uthole ingxube obukhulu, okuyinto sihlangana ku izinzipho ebusuku. Ungakwazi ngcono umphumela ngokugqoka ekhethekile amagilavu ebusuku.
Amafutha unika ngezipikili a kukhanye zemvelo, akhanye futhi ukubukeka enempilo. Ngokuvamile kungabonakala nokucwala ukuthi afeze master isandla massage nge nail sula, bezihlikihla amafutha isikhumba, lo cuticle nesitsha nail uqobo. Ngaphezu yobuhle umsebenzi namafutha amafutha nezenzo njengoba isihlangu ezifeni ngenxa wesenzo amagciwane.
Massage izinzipho ne peach ibhotela okungukuthi efiselekayo do 2-3 izikhathi ngosuku, ikakhulukazi ngaphambi lacquer enamathela. Ungakwazi ukwengeza amaconsi ambalwa nezinye amafutha - lemon, isibonelo, noma amafutha e-lavender.
Nguyenhanh «The Beat» - ukunambitheka abasha ngokugqamile
Edward Martsevich: Biography, Filmography, izithombe, imbangela yokufa